Katedraly St Laurent Ambohimanoro
Ny anglikanina eto Madagasikara
Finoana Anglikana, Komity Katedraly, Vaomiera ara-panahy
NY ANGLIKANA ETO MADAGASIKARA
Nananosarotra ny fidirany, fa ankehitriny kosa izy dia manana ny toerany
Raha ny taona 1810 no nanomboka tonga taty amin’ny faritra andrefan’ny Ranomasimbe Indiana ny Anglikana, dia ny taona 1862 kosa no tonga voalohany nisava lalana teto Madagasikara ny Evekan’i Maorisy Mgr Ryan, tamin’ny fotoana nanandratana ny mpanjaka Radama II. Ny taona 1864 vao tena nanao ny asa misionera ny misiona Anglikana nentin’ny fikambanana SPG (Society for Propagation of Gospel). Tany amorontsiraka atsinanana no niasana satria tsy narisika tamin’ny idirany teto andrenivohitra mihitsy ny misiona protestanta LMS. Rehefa natao ny fifandresen-dahatra nandritry ny taona maro, dia tafiditra teto Antananarivo ihany ny Anglikana fony Ranavalona-II, ary tanatin’ny ady mangotraka nifanatrehan’ny fanjakana Malagasy sy ny Frantsay (1880-1885) no nahatanterahan’izany.
Nanomboka niroborobo amin’izay hatreo, ka rehefa niala teto fa nahavita ny asany ny Eveka Kestell-Cornish ny volana Septambra 1896, dia katedraly (i) iray no voaorina ary 10 000 no mpino Anglikana voaisa teto Madagasikara (ii). Ny taona 2008 dia efa nahatratra 250 000 eo ho eo isika teto amin’ny Diosesin’Antananarivo fotsiny, ary efa aman’hetsiny maro manerana ny nosy (iii).
Ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM) na ny Fiangonana Anglikana dia anatin’ny Provansa eklesiastikan’ny Ranomasimbe Indiana (iv). Ivondronan’ny diosesy enina ny EEM ka i Mgr Samoela Jaona Ranarivelo, Evekan’Antananarivo no mitarika azy izao. Manana anjara toerana lehibe ny EEM eo anivon’ny FFKM. Noho ny maha-fiangonana tetezana azy dia mampifandray ny Katolika Romana (EKAR) sy ny Protestanta (FFPM) izy ary tena mandala ny firaisam-pinoana (eokomenisma) tokoa. Amin’ny fifandimbiasam-pitondrana eo anivon’izany fiombonana Kristiana izany dia anjaran’ny Filohan’ny EEM, no mitondra mandritry ity taona 2014 ity.
(i) Katedraly : misy ny “cathedra”(seza fiketrahan’ny Eveka). Ny fisian’izy io ihany no maha-katedraly ny
(ii) “ Ny Tantaran’ny Fiangonana Anglikana eto Madagasikara” (G.F. Pascoe, nadikan’Atoa Lucien Randrianarivelo amin’ny teny malagasy)
(iii) Mgr Rabenirina (interview tamin’ny Gazety “Le Quotidien”, nivoaka ny 04/04/2008)
(iv) Ny diosesin’i Maorisy sy ny diosesin’i Seychelles no manampy ireo diosesy eto Madagasikara ka mamaritra azy. Niorina ny taona 1973. Mgr Ian Ernest no Arseveka ankehitriny.
« Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo » 28 octobre 2016
Ny Raiko miasa mandraka ankehitriny, ary Izaho koa miasa, (Jao 5:17) 10 juillet 2016
Fitsidihina ny « Village Famonjena » 10 juillet 2016
Ny Hira Anglikana 10 juillet 2016
Ny Boky Fivavahana 10 juillet 2016
Ny Alahadin’ny TRINITE 10 juillet 2016
Fametrahana ny Vicaire général sy ireo Arsidiakona telo vaovao 25 avril 2016
Ny Sampana SKOTO eto amin’ny Katedraly 24 avril 2016
Ny Katedraly Santa Laurent Ambohimanoro 24 avril 2016
Ny Sehatra SEKOLY ALAHADY eto amin’ny Katedraly 15 avril 2016
Hafatry ny Mpitondra
RAZAHARIMANGA Jeannine Louistte dans NY ANGLIKANISMA : Fiangonana tetezana
Razafindralambo Tantely dans Ny Sampana Mpihira Sy Sakristana (S.M.S.)
Virtual Private Server dans Ny Boky Fivavahana
Web Hosting dans Ny taona Kristiana: ny vanin’andro mialoha ny andro Paska
Dedicated servers dans Ny Sehatra SEKOLY ALAHADY eto amin’ny Katedraly
ambatoharanana ambatolampy ambohimanoro anglikana anglikanina asa compass rose diosesy fankalazana fanorenana fetin'ny taranaka fiangonana finoana anglikana fitokanana herinandro masina hira kalendary kanterbory katedraly konfirmasiona loko octave paska riata sakristanina sampana sekoly alahady skoto sms tanora
Katedraly St Laurent Ambohimanoro © 2019.